A slot elithakazelisayo, Twin Spin Deluxe™ iza 6 reels futhi yinhlanganisela okhokhela inthanethi yekhasino slot. It inikeza ithuba lokuwina kuze kufinyelele 1000 izikhathi Ukubheja kwakho kuwo wonke spin nge onqobayo obumba uma ufika ayisishiyagalolunye lwezimpawu ofanayo yinhlanganisela. Isici Twin esondweni inikeza usizo kakhulu nge okungenani 2 futhi esiphezulu 6 itolitji ukubanjwa ixhunywe kukhasi itolitji eduze kokubonisa izimpawu ezifanayo. Ngesikhathi Kuhle-SMS Casino, ungakwazi ukugembula esisukela 10p ukuba £ 100 spin ngayinye kule slot okudlalekayo kuwo wonke amadivayisi. Nge-Twin esondweni sici, ungenza kuze kube 1000x esigxotsheni wakho. I ihluzo futhi uzizwe ifuze original Twin Spin slot Nokho lo mdlalo kakhulu ngcono nge ukubukeka kwayo izinguquko kanye izici inengoma ekhumbuza ngo-i-nightclub Ibiza.
Khetha Izimpawu yakho ngesikhathi Kuhle SMS Casino
Uma i-ukuzijabulisa ahlotshiswe, amatshwayo nge sekugcineni neon ngokuqinisekile ukukuyenga. Lezi amelwa Ace, King, Queen, noJack kanye cherry, izinsimbi, Amabha, blue ngamadayimane ngasikhombisa obomvu. Ungenza inhlanganisela wokuphumelela 9 noma ngaphezulu izimpawu ezifanayo lapho livela yinhlanganisela. Lezi amaqoqo akhiwa lapho uphawu is zibheka noma nendawo ibekwe eduze uphawu efanayo. Amakhadi nokudlala (A, K, Q futhi J) inganikeza wenkokhelo kuze kube 100x Ukubheja yakho ukuze 30 e yinhlanganisela. I izinsimbi kanye cherry kungaba imali engafinyelela ku 250 izikhathi ukubheja sakho ngenkathi 7s nemigoqo kungaba ninikela 500x esigxotsheni wakho. Uma ufuna ukuzitholela eliphakeme Yokuwina ithuba ngesikhathi Kuhle SMS Casino, ubambe blue diamond njengoba angakunika kakhulu ngendlela 1000 izikhathi Ukubheja yakho ukuze 30 e yinhlanganisela.
Nweba onqobayo yakho ngesikhathi Kuhle SMS Casino
I twin esondweni sici Twin Spin Deluxe™ Kuyavuza kakhulu njengoba banganwebisa ukuhayijekha i lo 3, 4, 5 noma 6 exhumene itolitji eduze ukubonisa izimpawu ezifanayo. Lokhu kusho ukuthi ungakha amaqoqo enkulu ngempela kalula. Njengomhlaba original umdlalo, kule slot kakhulu, zonke spin iqala ezifanayo futhi eduze twin itolitji ezixhunywe omunye nomunye.
Iyafana umdlalo yayo yasekuqaleni, Twin Spin Deluxe™ isebenzisa esihlukile umdlalo injini futhi imidwebo sithuthukiswe umagazini esondweni esengeziwe. Osebenzelana ukuhluka game, lokhu ngempela kwalokho ahlukile isithelo wesimanje umshini uhlobo. Spin Ukubheja yakho 1000 izikhathi kule slot esivusa amadlingozi ngesikhathi SMS yakho Casino Kuhle namuhla!
I Lab Spin |Hola Ibhonasi Up To £ 200
Burning Desire | Hola Ibhonasi Up To £ 200
Heppelthwaite J Usanda kuwina ku Wish Upon A Jackpot £5002.00
Oliveira M Usanda kuwina ku DoublePlay SuperBet £2072.00
BIRCHALL R Usanda kuwina ku rainbow nezeNgcebo £ 1000,00
Jackpot obuphelele £370484.89
Jackpot obuphelele £42535.71
Jackpot obuphelele £40592.63
Jackpot obuphelele £37279.81
Jackpot obuphelele £27046.12
Jackpot obuphelele £4021.32
Jackpot obuphelele £1658.35
SlotJar.com is operated by ProgressPlay Limited of Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, Malta. ProgressPlay kuyinto ehluphayo inkampani elinganiselwe bhalisiwe e Malta (C58305), that is licensed and regulated by Malta Gaming Authority and operates under a Class 1 ku 4 ilayisensi [inombolo MGA / CL1 / 857/2012 ekhishwe ku 16 April 2013] & [inombolo MGA / CL1 / 957/2014] esikhishwe 19 Apreli 2014 & [inombolo MGA / CL1 / 1141/2015 ekhishwe ngo-December 16 2015]; and is licensed and regulated by the UK Ukugembula Commission, Inombolo License 000-039335-R-319313-008. abantu UK babheja engosini nge website bayakwenza e ukwethembela ekhishwe UK Ukugembula Commission. Ukugembula kungaba umlutha. Google ngendlela efanele.